Vidio ny masirasira Vary masirasira hplc≥98% - Wisepowder
Sakafo masirasira mena
Ny masirasira mena dia ampiasain'ny Shinoa hatramin'ny taona 800 AD mba hampiroborobo ny fahasalamana kardia. Izy io dia mampihena ny haavon'ny tavy LDL (ratsy), raha toa kosa dia manondraka tavy HDL (tsara). Sakaosy masirasira koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo kibo sy fanampiana amin'ny fandevonan-kanina.
03 Horonantsary Fivarin-kena mena
04 Fampahalalana momba ny lalivay mena
anarana Sakafo masirasira mena
fahadiovana Monacolin K 0.4% -5.0%
Anarana simika statin
Synonyms Lovastatin, Monacolin K, Fihinana Monasika mena, Fangaro masirasira mena, hevi-kena mena
Bika Aman 'endrika Fangaro mena mena
Antsasak'aina 2 hatramin'ny ora 5
Solubility rano elanelana (1.3 µg / mL ao anaty rano)
Storage Condition Notehirizina tao anaty fitoeran-jiro mihidy tsy lavitra ny hamandoana sy hazavana
fampiharana Mdia manampy hampihena ny anton-javatra mety hampidi-doza ho an'ny metabolicsyndrome, ao anatin'izany ny fatran'ny kolesterola avo lenta, tsindry ary ra siramamy, ary koa ny lanjan'ny vatana.
05 Sakafo hena mena
Ny vary misy masirasira mena dia karazana vary nasiana novokarina amina karazana lasitra manokana.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa nandritra ny taonjato maro noho ny fananany mampiroborobo ny fahasalamana.
Ny vary masira mena dia ahitana ny monkolin Kasezary - ny fampiasa mavitrika toy izany hita ao amin'ny fanafody fametahana kolesterola toy ny lovastatin (Loharano 1Trusted).
Noho izany antony izany, matetika dia ampiasaina amin'ny fitsaboana mahomby izy amin'ny fanafody lafo vidy mba hanampiana ny fampihenana ny haavon'ny kolesterola ary hanohana ny fahasalamana amin'ny fo.
Ny fikarohana dia nanisy fiantraikany mahasoa hafa koa, miainga amin'ny fihenan'ny sela homamiadana mankany amin'ny fatran'ny siramamy amin'ny ra sy ny haavon'ny insuline.
Ankehitriny, ny masom-bary mena dia amidy matetika amin'ny famenon-tsena tsy mihetsika mba hanampiana amin'ny fitantanana kolesterola sy hanatsarana ny fahasalamana ankapobeny.
06 Sakafo hena mena
Ny fampiasana ny vary masirasira mena an-tsoratra dia miverina amin'ny fivarotam-panafody sinoa, Pen-ts'ao Kang-Mu (AD 1596), navoaka nandritra ny tarana-mpanjaka Ming. Ny karazan-javamaniry mena M. purpureus dia azo ambolena amin'ny substrata misy starch. Ny sandan'ny sakafo sy ny tombam-bidin'ny fanafody dia efa hatramin'ny 800 AD. Tamin'ny taona 1884, ny mpahay siansa holandey dia nandinika ny holatra Monasosy taorian'ny nahitan'ny mponina azy tao amin'ny nosy mpanjanatany Java. Nosokajiana izy io ary notendren'ny botaniista frantsay Philippe Van Tieghem.4 Ny vary masirasira mena dia nalaina avy tamin'ny vary navela hihinana niaraka tamin'ny masirasira M. purpureus. Tamin'ny 1895, ny karazana M. purpureus dia nihataka tamin'ny koji mena, nomena anarana ho an'ny loko volomparasy ny kolontsaina.
Ny vary masirasira mena dia nampiasaina tamin'ny fanafody sinoa mba hanamafisana ny tazo, hampiroborobo na hanatsarana ny fandevonan-kanina, hanafoanana ny hamandoana sy ny tenda, hampiroborobo na hanatsarana ny fivezivezena ao amin'ny ra, ary hanala ny fihenan'ny rà. Nandritra ny Fanjakan'ny Ming, ny masirasira mena dia nofaritana ho "mamy amin'ny tsiro ary mafana amin'ny fananana." Ny karazan-dehilahy Monasosy dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro tany Azia ho loharanon-kazo handokoana ny sakafo nentim-paharazana. Ny fananana fanafody amin'ny vary masirasira mena dia omena lanja manerana an'i Azia, ary io karazany io dia ampiasaina ihany koa hanaovana divay divay sy ho fitehirizana sakafo amin'ny fitazonana ny loko sy ny tsiron'ny trondro sy hena. Ny fangatahana sakafo ara-barotra dia misy ny lokon'ny saosisy, ham, surimi ary ketchup voatabia. Ny pigment dia manana tantara efa ela niasana tamin'ny fampiasana sakafo ho an'ny mpanjifa aziatika, fa tsy any Eropa na Etazonia. Na izany aza, fanadihadiana iray dia mirakitra ny fisoratana anarana momba ny patanty marobe mahazo ny fampiasana ny Monasosy ho toy ny pigment sakafo any Japon, Etazonia, France, ary Alemana. Ankoatr'izay, dia ampiasaina mba hanatsarana ny tsiron'ny sakafo any amin'ireo firenena Aziatika.
07 Moti-mihena ny lalivay mena amin'ny hevi-kena mena
Ny vary misy masirasira mena dia ahitana ny menaka monacolin K, izay fisambolan'ny synthesis synthesis. Mahavita manalefaka ny famokarana kolesterola ao anaty atiny. Tsy toy ny fanafody ny fampihenana ny kolesterola, izay mety hiteraka voka-dratsy mahery vaika, ny vary masira mena dia azo leferina.
Ny Monacolin K avy amin'ny masirasira hena dia mitondra amin'ny fikojakojana kolesterola mahazatra amin'ny ra
Fampahalalana efa namboarina namboarina namboarina namboarina avoaka ary misy ny 3% monacolin K (18mg isaky ny kapsul)
vegan, tsy mpahazo mpandraharaha anti-caking
08 Fangatahana henan-kena mena
Ny ankamaroan'ny fikarohana dia mifantoka amin'ny M. purpureus ho loharano voajanahary lovastatin, noho izany, manana fiantraikany mahasoa amin'ny fitsaboana ny hyperlipidemia. Ny porofo koa dia misy amin'ny fiantraikan'ny antibacterial sy anticancer, ary koa ny asa ataony amin'ny metabolism glycemic.
Ary mety hahomby ho an'ny
Ny maka fitrandrahana masirasira 1.2 grama isan'andro mandritra ny 4.5 taona eo ho eo dia mampihena ny mety hisian'ny aretim-po sy ny fahafatesana amin'ny olona manana tantaran'ny aretim-po.
Ny rà làlà tsy hita isa ao amin'ny olona voan'ny SIDA.
Ny fahazoana vary masirasira mena amin'ny vavany dia toa mampihena ny haavon'ny kolesterola sy trigliserida amin'ny olona mitondra otrikaretina VIH.
09 Fangaro masirasira mena fikarohana hafa bebe kokoa
Ny masira mena dia misy amin'ny endrika kapoaka na takelaka ary matetika novolavolaina miaraka amin'ny menaka hafa, toy ny CoQ10, nattokinase na asidra matavy omeo-3.
Ireo sotroina be dia be ireo dia any amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana, amin'ny fivarotam-panafody ary na dia mpivarotra antserasera aza.
Ny fatra nanomboka tamin'ny 200-4,800 mg dia nodinihina tamin'ny fitsapana klinika, matetika misy 10 mg eo ho eo ny monacolin (Loharano 18Trished).
Ny ankamaroan'ny marika famatsiana lehibe eo an-tsena amin'ny ankapobeny dia manoro hevitra fa maka eo anelanelan'ny 1,200–2,400 XNUMX isan'andro, mizara roa na telo doka.
Na izany aza, raha misy ny voka-dratsin'ny voka-dratsy sy ny ahiahy miaro amin'ny voankazo masira mena, tsara raha miresaka amin'ny dokotera ianao mba hamaritana ny fatra tsara indrindra aminao.
10 Sobika mena misy hevi-kena mena
11 Drafitra momba ny hevi-mena mena
]Hsieh PS, Tai YH. Ny fitrandrahana mamoaka Monascus purpureus M9011 dia misoroka sy manohitra ny fiakaran-doha-fruktosa amin'ny voalavo. J Agric Food Chem. 2003, 51 (14): 3945-3950.12822928
Shi YC, Pan TM. Mofomamy mena, diabeta, ary ny adin-tsaina momba ny oxidative: valiny a. Fampiasa Microbiol Biotechnol. 2012; 94 (94): 47-55.22382167
Bianchi A. Extracts of Monascusus purpureus mihoatra ny statins-mombamomba ny fahombiazana sy fiarovana ny fampiasana ireo sombin-tariby Monascus purpureus. Chin J Integr Med. 2005, 11 (4): 309-313.16417786
03. Horonantsary Fivarin-kena mena
04. Fampahalalana momba ny lalivay mena
05. Sakafo hena mena
06. Sakafo hena mena
07. Moti-mihena ny lalivay mena amin'ny hevi-kena mena
08. Fangatahana henan-kena mena
09. Fangaro masirasira mena fikarohana hafa bebe kokoa
10. Sobika mena misy hevi-kena mena
11. Drafitra momba ny hevi-mena mena